Drama, Essays.. » မျှော်လေလေ ဝေး…	10
ဟဲ ဟဲ.. ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ တစ်ခါတစ်လေတော့ ရေးချင်တာတွေ လျှောက်မရေးဖြစ်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စပျစ်သီးကြီးလို့သတ်မှတ်ပြီး မျှော်နေသူများရှိမလားလို့ တွေးမိတိုင်း အောက်က စာပိုဒ်လေးနှစ်ကြောင်းကို ပြန်တွေးမိတာနဲ့ ကီးဘုတ်ပေါ်တင်ချင်နေတဲ့လက်ကို ဖယ်၊ စိတ်ထဲမှာ ပြောချင်တာတွေများလာတော့လည်း အိပ်ချိန်မစို့မပို့လေးကျန်တာနဲ့ အဲ့လိုနဲ့ကို စကားလုံးတွေမျိုချလိုက်ရပြန်တယ်ပေါ့။ ပြောရရင်တော့ (တစ်ကယ်ပါ) စိတ်ထဲထင်တာပြောရရင် ကျွန်တော်စာပေကင်ပေတိုင်ရုံးကိုလည်း ကြောက်တာပါတယ်ပေါ့။ တစ်ကယ်ဗျာ.. အရင်ကဆို ရေးချင်တာတွေ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်၊ စည်းမဲ့ဘောင်မဲ့ (စည်းလွတ်ဝါးလွတ်မဟုတ်ဘူးနော်) လွပ်လပ်စွာတွေးတော၊ ကျယ်ပြန့်စွာ ရေးပြောလေသတည်းပေါ့။ ကိုယ်ထင် ကုတင်ရွှေနန်းပေမို့လား။ ကိုယ့်အိပ်ယာ တစ်ကမ္ဘာထင်သလိုပေါ့နော်။ စိတ်ထဲပေါ်လာတာနဲ့ လက်ကို ကီးဘုတ်ပေါ်တင်ပြီး အစကနေအဆုံး တစ်ထိုင်တည်းရေးလိုက်တာ တစ်ခါတစ်လေတော့နာရီဝက်၊ တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ၃၊ ၄ နာရီအကြာမှာ ရေးချင်တာရေးပြီး ပေးချင်တဲ့ ခေါင်းစဉ်ပေးလိုက်ပြီး ခလုပ်လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ နှစ်ရက်၊ သုံးရက်လောက် ကိုယ်ရေးထားတာလေးကို ဒီ မန့်သလေးဂွဇွတ်ကြီးကို ဖွင့်လိုက်တိုင်းမြင်နေရတော့ နွားပြာကြီး အောက်သွားမရှိသလိုမျက်နှာကြီးနဲ့။
ဒီတော့မှ ကျုပ်တစ်ယောက် ဒီဆိုက်က လင့်လေးကိုရှာပြီးပြရတာပ၊ အဲ့ဒီတော့မှ “သြော်… အင်း… အဟွင်း.. ညှင်းညှင်း
Mike says: .မောင်မလာ မောင်သာငတ်
.မောင့်နေရာ လူမပြတ် .Long time no see
ကြွေလွင့် ပန်း says: သတိကတော့ရပါတယ်ဦးကြီးမိုက်ရေ
Ma Ma says: ကြွေလွင့်ပန်းဆိုလို့ ဘယ်သူများလဲလို့။
အိမ်မက်ထဲမှာ ပြန်တွေ့တာပေမယ့် ကြက်ကြော်နဲ့ ဧည့်ခံရမှာနောာာာာာာာာာာာာာာာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 803
ကြွေလွင့် ပန်း says: မြန်မာပြည်မှာ ဖွင့်တော့မယ်တဲ့ဗျား… ပထမတုန်းကတော့ ၀င်တာနဲ့ပြန်လာမယ် စိတ်ကူးထားတာ.. ခုတော့ ဈေးကွက်အခြေအနေက မကောင်းသေးလို့ ပြန်မလာသေးပဲ ခုဒီမှာအောင်မြင်နေတာနဲ့ပဲ နေဖြစ်နေတယ်
အလင်းဆက် says: စာပေကင်ပေတိုင်ရုံး….. ?????
Mike says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1988
Shwe Ei says: -မန့်သလေး ဂွဇွတ်မာ..ဂွတိုက်…ဇွတ်တိုးပီး မန့်မဲ့လူကြီးမရှိတော့..ပျင်းစရာကောင်းနေတယ်ဗျ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ဘူသူဖတ်ဖတ် မဖတ်ဖတ် ကွ ကိုယ် အံ ထုတ် လို့ ရရင်ပြီးရော။
Mr. MarGa says: လာစမ်းပါဗျာ
ဦးကြောင်ကြီး says: ဂဇွတ်သဂျီး အယာတိုလာ မာမွတ်ခိုမ် ပေါဒေါ့ တလတလ ဖက်သူ သိန်းချီရှိဆို… ဘာလဲ မင်းက သဂျီး မဖြစ်တိုင်း စဗျစ်သီး ချဉ်တာလား…။ ငါ့လို့ သဂျီးလောင်းဖြစ်ချဉ် သူ့သမီး ရအောင်ဖန်ကွ..။ နောက်တျောက်မွေးယဉ် ပြောတာပါ။ လက်ရှိသမော်ဒီကဒေါ့ ကြောင်စာ…